Taliyaaniga: 400 Muhaajiriin ah oo badda ku dhintay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wararka laga helayo Taliyaanigana waxa ay sheegayaan in 400 oo qof oo muhajiriin ah ay dhinteen kaddib markii ay degtay doontii ay la socdeen, maalin markii ay ka dhaqaaqeen Liibya.
Qaar ka mid ah dadka badbaaday waxa ay sheegayaan in caruur ay u badan yihiin 400 ee dhimatay, sidaas waxaa qortay BBC.
Dadka tahriibaya waxay u badan yihiin dhallinyaro
Dalalka colaadaha ay ka jiraan ayey dadkan ka cararayaan
In kabadan 280,000 oo qof ayaa si sharci daro ah ku galay Yurub, sanadkii hore, badankoodana waxay ka carareen dalalka Suuriya, Eritrea iyo Soomaaliya. Qiyaastii 3,400 oo qof ayaa badda ku dhimatay sanadkii 2014kii.